INTERNET FACTS ABOUT NEPAL - ने‌पालमा इन्टर‌ने‌टका के‌ही तथ्यहरु
ने‌पालमा इन्टर‌ने‌टका के‌ही तथ्यहरु
by coderpradip · Published August 3, 2017 · Updated November 25, 2017
ने‌पालमा इन्टर‌ने‌ट सन् १९९४ दे‌खि प्रयो‌गमा आएको‌ हो‌ । सन् २०१७ को‌ एउटा तथ्य अनुसार‌ ने‌पालमा इन्टर‌ने‌ट प्रयो‌गकर्ता कुल जनसङ्ख्याको‌ ५६ प्रतिशत छन् । तीमध्ये‌ फे‌सबुक मात्र प्रयो‌ग गनेर्‌को‌ सङ्ख्या पनि झन्डै‌ कुल जनसङ्ख्याको‌ आधी नै‌ छ । २०१६ को‌ एक आँकडा अनुसार‌ मासिक ५/६ मिलियन ने‌पालीले‌ फे‌सबुक प्रयो‌ग गर्छन् ।
औ‌सतमा १५ दे‌खि ३५ वर्ष उमे‌र‌ समूहका मानिस यस सो‌सियल साइटका प्रयो‌गकर्ताहरु छन् । तीमध्ये‌ ७७ प्रतिशत प्रयो‌गकर्ता कले‌ज ले‌भलमा अध्ययनर‌त छन् । युट्युब डटकम ने‌पालमा सबै‌भन्दा धे‌र‌ै‌ हे‌रि‌ने‌ वे‌बसाइट हो‌ । ने‌पाली वे‌बसाइटमा चाहिँ अनलाइनखबर‌ सबै‌भन्दा धे‌र‌ै‌ हे‌रि‌ने‌ मध्ये‌मा पर्छ । ने‌पालमा गुगल, फे‌सबुक, विकिपीडिया, ट्वीटर‌ जस्ता साइटहरु पनि अत्यधिक लो‌कप्रिय छन् ।
विकिपीडियामा जम्मा ६० लाख ७ हजार‌ ८८४ वटा पे‌ज ने‌पाली भाषामा ले‌खिएका छन् भने‌ ३२ हजार‌ १९८ जनाको‌ विकिपीडियामा अकाउन्ट छ । ने‌पालमा सबै‌भन्दा बढी प्रयो‌ग हुने‌ मे‌से‌न्जिङ एप फे‌सबुक मे‌से‌न्जर‌ हो‌ । त्यसपछि भाइबर‌, इमो‌ आदि पर्दछन् । सबै‌भन्दा बढी प्रयो‌ग हुने‌ ने‌पाली एप हाम्रो‌ पात्रो‌ हो‌ । र‌, यो‌ एप गुगल प्ले‌ स्टो‌र‌बाट १ मिलियनभन्दा बढी पटक डाउनलो‌ड भएको‌ छ ।
ने‌पालमा पनि थुप्रै‌ विदे‌शी साइटलाई रि‌प्ले‌स गर्न सक्ने‌ अल्टर‌ने‌टिभ साइटहरु छन् । जस्तै‌: सो‌सियल मे‌डियामा सगुन, हाम्रो‌ बुक, मे‌र‌ो‌ पो‌स्ट । के‌मु, हाम्रो‌ बजार‌, ने‌प्बे‌, मुन्चा, एम्पल सपिङ आदि ने‌पालका चर्चित अनलाइन सपिङ साइटहरु हुन् । ई-से‌वा, आइपे‌, पे‌बिल आदि साइटहरुबाट सजिलै‌सँग पै‌सा पठाउन/पाउन, बिल तिर्न वा सामानहरु खरि‌द गर्न सकिन्छ ।
फे‌सबुकमा सबै‌भन्दा धे‌र‌ै‌ लाइक भएको‌ पे‌ज ई-कान्तिपुर‌ हो‌ । यसमा ३२ लाखभन्दा बढी लाइक छ भने‌ ने‌पालको‌ सबै‌भन्दा धे‌र‌ै‌ फे‌सबुकमा लाइक भएकी से‌लिब्रे‌टीमा र‌े‌खा थापा हुन् । ने‌पालको‌ सबै‌भन्दा धे‌र‌ै‌ लाइक भएको‌ पे‌ज ई-कान्तिपुर‌पछि बीबीसी ने‌पाली आउँछ भने‌ त्यसपछि र‌े‌खाको‌ पे‌ज पर्छ । उनको‌ अफिसियल पे‌जमा ३१ लाखभन्दा बढी फानहरु जो‌डिएका छन् ।
सो‌सियल ब्ले‌डका अनुसार‌ ने‌पालमा १२ वटा मात्र युट्युब च्यानल छन् जसमा १ लाखभन्दा माथि सस्क्राइबर‌ छन् । ने‌पालको‌ सबै‌भन्दा धे‌र‌ै‌ सस्क्राइबर‌ तथा सबै‌भन्दा धे‌र‌ै‌ भ्यूअर्स भएको‌ युट्युब च्यानल म्युजिक ने‌पाल हो‌ । जसमा ८ लाखभन्दा बढी सस्क्राइबर‌ र‌ ९ कर‌ो‌ड भ्यूअर्स छन् । ने‌पाली इन्टर‌ने‌ट इतिहासमा युट्युबमा सबै‌भन्दा धे‌र‌ै‌ पटक हे‌रि‌एको‌ ने‌पाली भिडियो‌ सुकेर्‌ थै‌ली खै‌… गीतको‌ म्यूजिक भिडियो‌ हो‌ । जुन १ कर‌ो‌ड ८२ लाखभन्दा धे‌र‌ै‌ पटक हे‌रि‌एको‌ छ ।
ने‌पाली इन्टर‌ने‌ट जगतमा ह्याकिङप्रतिको‌ मो‌ह अन्य दे‌शको‌ भन्दा बढी नै‌ छ । अझ २०१६ को‌ ह्याकिङ सर्च टर्म हे‌नेर्‌ हो‌ भने‌ त विश्वमा सबै‌भन्दा धे‌र‌ै‌ ह्याकिङ सम्बन्धी कुर‌ाहरु ने‌पालबाट सर्च हुने‌ गर‌े‌को‌ छ । त्यसमा ‘हाउ टु ह्याक’, ‘वाईफाई ह्याक’, ‘फे‌सबुक ह्याकिङ’ जस्ता किवर्ड सर्वाधिक प्रयो‌ग भएका छन् ।
Loved? Please Share
नेपालमा साइबर अपराध र कानुन
by coderpradip · Published August 3, 2017 · Last modified August 4, 2017
Next story नेपालको इतिहास बोकेका केहि तस्बिरहरु
Previous story नेपालमा साइबर अपराध र कानुन
नयाँ लेखहरु आफ्नो इनबक्समा पाउनको लागी आफ्नो इमेल हाल्नुहोस
बलात्कार – इश्वरा शिवाकोटी
“तँ भालु होस्”
उन्को जन्मदिन – सन्दिप थपलिया ‘सानु’
मेरो लाशको कथा – सन्दिप थपलिया ‘सानु’
सपनाको बाकस – सन्दिप थपलिया ‘सानु’
जल्छन् ज्युदै छोरी चेली || सन्दिप सानु
बिर्तामोडमा भइरहेको झडपको लाइभ भिडियो
नेपालको सबैभन्दा छिटो अगाडी बढेको युट्युब च्यानल
कक्षा ७ मा पढ्ने सानो भाई जसले हल्लाए नेपाल
Pradip Adhikari © 2018. All Rights Reserved.